I-Aluminium Screw enhle kakhulu, i-Aluminium Socket Button Screws, i-Aluminium Socket cap Screws for sale
Isikulufu sekhanda esinemba ngokunemba kakhulu
Isikulufa se-Customzid CNC Aluminium Socket Lezi yizikulufu zeCustomzid CNC Aluminium Socket, ubungabona uhlobo lwe-diffrence mayelana ne-Button Head Screws kanye ne-Aluminium Socket Button Screws Ibuye ibe nanoma yimuphi umbala futhi i-matercial...
Isikulufu sekhanda esinemba ngokunemba kakhulu Isingeniso Somkhiqizo Isikulufa se-Aluminium ngokuvamile sithathwa njengohlobo olulodwa lwezinto zokubopha ze- aluminium. Imvamisa isetshenziselwa okokusebenza kwasekhaya nasehhovisi, imishini...
Shenzhen fektri aluminium M3 flat ikhanda bolt Hobbycarbon Isikulufo se-Hobbycarbon M3 7075 se-Aluminium sithandwa kakhulu ngenxa yesisindo saso esikhanyayo, Amandla aphezulu nemibala emihle ethandekayo emakethe. Nayi inkinobho ye-aluminium...
I-aluminium alloy 6061/7075 eyenziwe ngezifiso isiyingi sekhanda Isikali se-Aluminium ngokuvamile sithathwa njengohlobo olulodwa lwe- aluminium fasteners. Imvamisa esetshenziswa ekhaya nasendlini yamahhovisi, imishini yokuxhumana, umhlangano...
Isikulufu se-Costomized Socket head aluminium Isingeniso Somkhiqizo Isikali se-Aluminium ngokuvamile sithathwa njengohlobo olulodwa lwe- aluminium fasteners. Imvamisa esetshenziswa ekhaya nasendlini yamahhovisi, imishini yokuxhumana, umhlangano...
I-Cap Head Screw Muti-color Aluminium Screw Isikali se-Aluminium ngokuvamile sithathwa njengohlobo olulodwa lwe- aluminium fasteners. Imvamisa esetshenziswa ekhaya nasendlini yamahhovisi, imishini yokuxhumana, umhlangano wemikhumbi neminye imboni...
I-M3 bolt hex head aluminium screws Isingeniso Somkhiqizo Isikali se-Aluminium ngokuvamile sithathwa njengohlobo olulodwa lwe- aluminium fasteners. Imvamisa esetshenziswa ekhaya nasendlini yamahhovisi, imishini yokuxhumana, umhlangano wemikhumbi...
Incazelo Yomkhiqizo Izicucu ze-aluminium eziyisisekelo se-flat flat IHobbycarbon M3 7075 Aluminium isikulufa ithandwa kakhulu ngenxa yesisindo sabo esikhanyayo, Amandla Aphakeme nemibala emihle anodised emakethe. sinemibala ehlukahlukene...